ဟင်းလင်းပြင်: May 2008
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ အစီရင်ခံစာ
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ
Posted by HinLinPyin at 21:45 1 comments Links to this post
Posted by HinLinPyin at 01:390comments Links to this post
Posted by HinLinPyin at 03:530comments Links to this post
နာဂစ် ... တဲ့
Posted by HinLinPyin at 04:46 1 comments Links to this post
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေကိုလိုက်မရှာတာ သူတို့ကိုမြှင်းပြီးသတ်တာမျိုးပဲ ။
နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကိုလက်မခံတာ၊ ခိုးယူတာဟာလည်း အငတ်ထားသတ်တာတမျိုးပဲ။
ရသင့်တဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့် မပေးတာဟာလည်း ရောဂါပိုးနဲ့တိုက်သတ်တာတမျိုးပဲ။ .....(နှိပ်ပြီးဆက်သွားပါ)
(မှတ်ချက်။ ဒေါင်းအိုဝေ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၆) ဧပြီ၊ မေ၊ ဂျွန် စာအုပ်တွင် ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြမည့်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်)
Posted by HinLinPyin at 00:11 1 comments Links to this post
ဘန်ကီမွန်း မင်းဘာလုပ်မလဲ မြန်မြန်ပြော ....
Posted by HinLinPyin at 19:18 1 comments Links to this post
Posted by HinLinPyin at 18:010comments Links to this post
အမေ.... ၊ နာဂစ်နှင့် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဇာတိမြို့ကလေး
အခုဆို ကျနော့်ဇာတိမြို့ကလေးကို ကျနော် ပြန်မရောက်နိုင်ခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်မက ကြာခဲ့ပါပြီကော။ ကျနော်ငယ်ငယ်က အမေရိုက်ပြီး အတင်းပို့ခဲ့ရတဲ့ မူလတန်းကျောင်းကလေးရော ရှိသေးသလားအမေ။ ကျောင်းရှေ့က ကုက္ကိုလ်ပင်တန်းကတော့ ကျနော်ရှိကတည်းက သူတို့ ခုတ် ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာ ကျနော်မှတ်မိနေပါတယ်။ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး အပြီးမှာနော်။ အမေ မှတ်မိတယ်မလား။ အဲဒီတုန်းက အမေက ကြောက်လိုက်တာ တုန်နေတာပဲ။ ---(နှိပ်ပြီးဆက်သွားပါ)---
Posted by HinLinPyin at 03:520comments Links to this post
ဓါတ်ပုံ ... မြင့်မိုရ်မီဒီယာ
Posted by HinLinPyin at 00:430comments Links to this post
နာဂစ် ၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနှင့် ဗီသိုဗင်
Posted by HinLinPyin at 17:520comments Links to this post
(Pls forward this poem to the world)
Here, there, human bodies' everywhere
All my answers whisper…and whisper.
'Cause those sympathies will help to fix my wounded floor.
'Cause those sympathies will help my life reconstruct.
(Dedicated To My Mother And People Of Burma Who Lost Lives And Who Are Hardly Survived Under Both Natural And Political Weathers!)
Posted by HinLinPyin at 18:170comments Links to this post
Posted by HinLinPyin at 22:470comments Links to this post
-(၃/၂၀၀၈)၊ (၁၀-၅-၂၀၀၈) ---နှိပ်ပါ---
Posted by HinLinPyin at 10:240comments Links to this post
၂၀၀၈ခုနှစ၊ မတ် ၂၃။
စိုင်းထီးဆိုင်တယောက် ဆုံးရှာပြန်ပါရော့လားဗျာ။ တနေ့ကပဲ ကျနော်နဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ အီးမေးလ်အပြန်အလှန်ရေးကြရင်း
တကယ့်ဂီတ အနု ပညာသည်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့သူက - ဂီတလုလင်မောင်ကိုကိုဆုံးသွားတာ။ ဘယ်သူမှဂုဏ်ပြုစာမရေးကြဘူး။
ပြည်တွင်းမှာလည်း မရေးကြဘူးလို့ ၀မ်းနည်းဒေါသနဲ့ပြော ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း သူ့ခံစားမှုကိုကိုယ်ချင်းစာမိတာနဲ့ ငိုင်ကျသွားမိတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျာ။ သူနဲ့မတိမ်းမယိမ်းကွယ်လွန်ကြတဲ့ အေ၀မ်းစိုးမြင့်။ ကိုလေးညွန့် စသဖြင့် အစားထိုးမရတဲ့ပညာရှင်တွေ ကွယ်လွန်တာဟာလည်းတကယ်ကို ၀မ်းနည်းစရာပဲ။ ကျနော့်ခေါင်းထဲမှာ (ရင်ထဲမှာလို့လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်) သူတို့ကို ဂုဏ်ပြု တဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစောင်လောက် ရေးချင်လိုက်တာလို့ ပေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကသူတို့အကြောင်းကို သူများတကာထက် ပိုသိတာလဲမဟုတ်၊ သူတို့ပညာ ကိုလဲ လိုက်မီတာမဟုတ်ပဲနဲ့။ ရေးလိုက်ပါမှ ယောအတွင်းဝန်ဦးဘိုးလှိုင်ရဲ့စာကို ငတာက ချီးကျူးတာမျိုးဖြစ်နေမှာစိုးလို့ မရေးခဲ့ဘူးလို့ အဲဒီမိတ်ဆွေကို ပြန်ပြော လိုက်မိပါတယ်။ အခုတော့သူတို့နောက်ကို ထက်မြက်တဲ့ ဂီတာပညာရှင်နောက်တယောက် လိုက်သွားပါပြန်ကောလားဗျာ။
သူကွယ်လွန်တဲ့သတင်းကို ကျေညာပြီးနောက် ရေဒီယိုတွေကနေသူ့ရဲ့ ‘နေရစ်တော့ကွယ်၊ သွားတော့မယ်’ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ဖွင့်ပေးတော့ ကျနော် ဖြင့်မျက်ရည်ကျလုတဲတဲ ငေးနေမိ။ ပြန်သတိရနေမိတယ်။ သတိရဆို ကျနော့်ဘ၀ရဲ့အကြီးမားဆုံး အပြောင်းအလဲကြီးတခု ဖြစ်ပေါ်နေတုန်းမှာ ကျနော့်ရဲ့ဘ၀ အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ သီချင်းများနဲ့တေးသံရှင်ပေကိုး။ ဘယ်လိုမှ မေ့မရတဲ့ နေ့ရက်များနဲ့ မေ့မရတဲ့သီချင်းများလေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ ကျော်က။
ခင်ဗျားလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ ကျနော့်လူငယ်ဘ၀ဟာ သာမန်လူ့လောကမှာတယ်ပြီးနေရတာမှမဟုတ်တာ။ ထောင်ထဲနဲ့ တောထဲမှာဖြတ်သန်းရတဲ့ ကာလကပိုများတဲ့ဥစဏာ။ ဒီလိုနဲ့ တခါတော့ခင်ဗျားတို့ သိကြတဲ့အတိုင်း ပစ္စ န္တရစ်အရပ်မှာ ကျနော်ကာလ တခုသွားနေလိုက်ရတယ်။ အဲဒီကပြန်ရောက်လာတော့ အင်းစိန်ထောင်ထဲရောက်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကျမှ ခေတ်ပေါ်စတီရီယိုတေး တွေကိုကြားရတာကိုးဗျ။ ထောင်ပြင်ကနေ လွင့်ပျံလာတဲ့လော်သံတွေကပေါ့။ ကျနော် ဖြင့် ဟာ - ငါ့နားများမှားတာလား။ ဘာသာခြား သီချင်းတွေ လွင့်နေတာလား။ ဂီတကလည်း ဆန်းချင်တိုင်းဆန်း။ စာသားတွေကလည်း မပီပဲကိုးဗျ။ ယဉ်ကျေးမှု ချင်း ဆောင့်မိတာလို့ ဆိုရမလားမသိပါဘူး။ ခေါင်းကိုချာလပတ်လည် ရမ်းသွားတာပဲ။ အဲဒီနောက် အိမ်ပြန်ရောက်မှ နှမနဲ့ညီကိုမေးကြည့်ပြီး သူတို့ ပြောပြလို့သိရ တယ်။ အော် - ဒါစတီရီယိုတေး ဆိုတာတဲ့လားပေါ့။ နို့ပေမဲ့ ကိုယ့်နားနဲ့စိမ်းလွန်းလို့ ကျနော်က အလှမ်းဝေးဝေး မှာပဲနေလိုက်မိတယ်။ တပုဒ်မှ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအထဲမှာ ထူးထူးခြားခြားချွန်ထွက်နေတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကိုတော့ သတိထားလိုက်မိတယ်။ အဲဒါက မနက်ကနေ နေ၀င်အထိ ဆိုရမလောက်နီးပါး ကြားနေရတဲ့သီချင်းက “မန္တလေးရောက်ရှမ်းကလေး တယောက်” ဆိုတဲ့သီချင်း။
အဲဒီနောက်တော့ ကျနော်အိမ်ကိုစွန့်ခွာရရော။ မိဘမောင်နှမနဲ့ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကို ခွဲခွာရရော။ ရှမ်းပြည်နယ်က တောင်တန်းတွေပေါ် ရောက် သွားတယ်။ ရှမ်း၊ ပအို့၊ တောင်သူ၊ လီရှော၊ အင်းသား၊ ဓနုစတာတွေ နေထိုင်တဲ့တောင်တန်းတွေ၊ လွင်ပြင်တွေမှာပေါ့ဗျာ။ အိုးစည်သံ။ လင်းကွင်းသံတွေမြိုင်လှတဲ့။ အဲ - မဟုတ်ဘူးဗျ။ အိုးစည်သံ - လင်းကွင်းသံဆိုတာက ပွဲလမ်းကျမှကြားရတာ။ ၀ါတွင်းဆွမ်းကပ်ဖို့ အဖိတ်နေ့မှာလည်းကြားရတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ အများဆုံးကြားရတာဟာ စိုင်းထီးဆိုင်နဲ့ စိုင်မော်ဝ်တို့ရဲ့ သီချင်းတွေပဲဗျို့။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက၊ ဘယ်လူမျိုးတွေအကြားရောက်ရောက် ကာလသား။ ကာလသမီးတွေဟာ ကက်ဆက်ပါလာသူကို စိုင်းထီးဆိုင်နဲ့စိုင်းမော်ဝ်တို့ရဲ့ သီချင်းတွေဖွင့်ခိုင်းကြတာပဲ။ လားရှိုးသိန်းအောင်တို့ ဘာတို့လည်းကြိုက်ကြပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်ယောက်၊ အထူးသဖြင့် စိုင်းထီးဆိုင်လောက်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တာ ဘယ်သူ့မှမတွေ့ရပေါင်ဗျာ။
ပအို့အမျိုးသားတွေမှာ အပျိုလည်တယ်ဆိုတဲ့ ဓလေ့ရှိတာကိုးဗျ။ အပျိုလည်တယ်ဆိုတာ ထူးထူးခြားခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တနေ့လုံး သနပ်ဖက်ခြံ။ ကြက်သွန်ခင်းထဲမှာ အလုပ်လုပ်ကြပြီးတဲ့နောက် ညမှာအပျိုလေးတွေရှိတဲ့အိမ်တွေကိုသွားပြီး မီးဖိုရှေ့မှာထိုင်၊ လေကန်ကြတာကိုးဗျ။ မီးဖိုဆိုတာက အိမ်ရဲ့အဓိက အခန်း။ ဧည့်ခန်းကြီးထဲမှာရှိတာပါ။ နောက်ပြီးကာလသားနဲ့ ကာလသမီး တယောက်ချင်းစကားပြောတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ရှင်အပျိုကလာသမျှ ကာလသားကို ဧည့်ခံစကားပြောရတာပါ။ ပြောတာက တဖက်ကအလုပ်လုပ်ရင်း တဖက်ကပြောတာပါ။ ဥပမာကြက်သွန်ချိန်ဆိုရင် ကြက်သွန်မျိုးတွေကို စိုက်ဖို့အတွက် ဥတွေက နေ အမြှောင်းတွေအဖြစ်ချွေကြရတယ်။ အိမ်ရှင်မိန်းကလေးက သူ့အိမ်ကမျိုးတွေကိုချွေ။ လာတဲ့ကာလသားတွေကလည်း ကိုယ်ယူလာတဲ့ ကိုယ့်အိမ်ကကြက်သွန် မျိုးတွေကိုချွေ။ အဲဒီလိုလေကန်ကြတာပဲဗျ။ အဲ။ ထူးခြားတဲ့ထုံးစံတခုက ကာလသားတွေက ကောင်မလေးတွေကို နင်ငါ့ကိုကြိုက်သလားလို့မေးရင် ကြိုက်တယ်လို့ ပြန်ဖြေရတယ်ဗျ။ မကြိုက်ဘူးလို့မဖြေရဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီလိုစကားဝိုင်းမှာ ပြောတာကို ဘယ်သူမှအတည်မယူရဘူးလေ။ သူတို့ထုံးစံပဲ။ ခုနကပြောနေတာနဲ့ ပြန်ဆက် ရရင် အဲဒီလိုအပျိုလည်ကြရာမှာ တတ်နိုင်တဲ့ကာလသားများက ကက်ဆက်လေးတွေ သယ်သွားကြတာကိုးဗျ။ ပြီးမှအပျိုရှေ့မှာဖွင့်ပြ။ နားထောင်ကြ။ ထင်မြင် ချက်ပေးကြပေါ့လေ။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ကြက်သွန်ထည့်တဲ့ ပလိုင်းတွေထဲမှာ ကက်ဆက်ခွေတွေနဲ့ ဓာတ်ခဲအသစ် အဟောင်း။ တပတ်ရစ်၊ ဓာတ်ခဲ မျိုးစုံပါလာ တတ်သဗျ။ လက်တဖက်မှာတော့ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးပေါ့ဗျာ။ မိုးရွာရွာ။ နှင်းကျကျအဲဒီစတိုင်က မပျောက်ဘူးဗျ။ အဲဒီလို ညတွေမှာ ဖွင့်တဲ့သီချင်းတွေကတော့ စိုင်းထီးစိုင်၊ စိုင်မောဝ်တို့ရဲ့ ဟာတွေပေါ့ဗျ။
ကျနော်က။ အဲဒီတုန်းကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တဖွဲ့နဲ့အတူနေ။ အတူစား။ အတူလှုပ်ရှားနေတာဆိုတော့ ရွာတကာလှည့်ပြီး မြို့နယ်အ လုပ်တွေ လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီကျနော်တို့ရဲ့အဖွဲ့မှာ သေနတ်လိုပဲ မပါမဖြစ်ပါလေ့ရှိတာက ကက်ဆက်နဲ့ ကက်ဆက်ခွေတွေပဲဗျ။ သူတို့ကဒေသခံလူထု။ အထူး သဖြင့် လူငယ်ပိုင်းတွေနဲ့စကားပြောပြီးရင် ကက်ဆက်လေးဖွင့်။ ထွေရာလေးပါး ပြောကြတာပေါ့ဗျာ။ ဒီအခါမှာ ကာလသားတွေက ဘာသီချင်းရှိသလား။ ဘယ်သီ ချင်းလေးဖွင့်ပါအုန်း စသဖြင့်ပြောကြ တောင်းဆိုကြတာ။ စိုင်းထီးဆိုင်နဲ့စိုင်မော်ဝ်တို့ရဲ့ သီချင်းတွေချည်းပဲ။ နောက်ပြီးကျနော်တို့တတွေ တတောင်ကနေတတောင်၊ တရွာကနေတရွာ သွားကြတော့လည်း လက်ထဲပါလာတဲ့ကက်ဆက်က သူတို့သီချင်းတွေပဲ ထွက်နေတာကိုးဗျ။ ဒါကြောင့် ကျနော့်အဖို့ ရှမ်းပြည်နယ်က ဒီတော။ ဒီတောင်၊ ဒီမြောင်၊ ဒီစမ်းတွေနဲ့ ဒီသီချင်းတွေဟာ ခွဲလို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်။ လှေစီးရင်း။ မြင်းစီးရင်း ဒီသီချင်းတွေနဲ့လွင့်မျောခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး။ တခါတလေကိုယ်က သူတို့စကားနားမလည်လို့ ကိုယ့်ကိုရွာထဲက အိမ်တအိမ်မှာ သေနတ်တလက်၊ ကက်ဆက်တလုံးနဲ့ ထားခဲ့တာမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်။ ကက်ဆက်နဲ့ထားခဲ့တယ်ဆိုတာထက် ထီးဆိုင်တို့စိုင်မောဝ်တို့နဲ့ ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ပိုမှန်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျနော်အဲဒီနေရာတွေကိုခွာရတဲ့အခါမှာ သူတို့သီချင်းတွေခေါင်းထဲရင်ထဲမှာ စွဲကပ်ပြီးပါလာတာပေါ့။ အဲဒါလည်းကြာသွားပြီ။
အခုတော့ကျနော့်လက်ထဲမှာ သေနတ်မရှိတော့ဘူး။ ရင်ထဲမှာစိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့သီချင်းတွေတော့ရှိနေတယ်။
Posted by HinLinPyin at 22:220comments Links to this post
Posted by HinLinPyin at 04:20 1 comments Links to this post
ရက်ပိုင်းမျှသာလိုတော့တဲ့ “ဆန္ဒခံယူပွဲ” အတွက် နအဖဟာ ခက်ခက်ခဲခဲ တက်လှမ်းနေတာ တွေ့နေရတယ်။ ခြိမ်း ခြောက်တာ ချော့မြူတာတွေအပြင်
ဖမ်းချုပ်တာ၊ ချောင်းရိုက်တာတွေပါ ဖောဖောသီသီကြီးလုပ်နေတယ်။ မရှက် - မကြောက် - မကွယ် - မ၀ှက်။
Posted by HinLinPyin at 04:170comments Links to this post
၁။ ၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ မေလ (၁၀)ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်မည့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင် မည့် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်သဘောပေါက်ကာ
မိမိတို့၏ဆန္ဒအစစ်အမှန်ကို ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ဖော်ထုတ်ပြသကြပါရန်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ၂၀၀၈ - ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်သူသို့ပန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များပါ ကိစ္စရပ်များကိုလည်း တခဲတနက်ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါရန် တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။
၂။ ယခုဆန္ဒခံယူမည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းသည် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များက ရေးဆွဲထားခြင်းမဟုတ်၊ စစ်တပ်က အဓိ က အာဏာအရပ်ရပ်ကို ချုပ်ကိုင်ထားမည့် ဗဟိုကချုပ်ကိုင်သော အစိုးရပုံစံသာဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရ ပြည့်ဝသည့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုကိုလည်း မဖော်ဆောင်နိုင်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူလူထုသည် ၄င်းတို့နှင့် ထိုက်တန်သော အစိုးရကိုသာရရှိသည်ဆိုသည့် နိုင်ငံရေး အဆိုအမိန့်အရ နိုင်ငံရေးအသိ၊ နိုင်ငံရေးသတိရှိသူတိုင်းက မိမိတို့၏ ဆန္ဒမဲတစ်ပြားစီဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ပို့ ဆောင်ကာ သမိုင်းမှတ်ကျောက်တင်ကြပါရန် ထပ်မံတိုက်တွန်းအပ် ပါသည်။
၃။ မြန်မာ့အရေးကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက အာရုံစိုက်စောင့်ကြည့်ကြမည်ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့၏ ဆန္ဒအမှန်ကိုထုတ်ဖော်ခြင်းကြောင့် ဘေး အန္တရာယ်ကြုံတွေ့မည်ကို စိုးရွံ့ရန်မလို။ စိုးရွံ့မှုကြောင့်ဆန္ဒအမှန်ကို မျိုသိပ်ခြင်း၊ မဲရုံသို့သွားရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ကြားနေခြင်းတို့သည် ရလဒ် ဆိုးများကို သွယ်ဝိုက်ထောက်ခံရာ ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုဆိုးရွားခါးသီးသော အနာဂတ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ကို အထူးသတိချပ်ရန်လည်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၄။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီက ၂၀၀၈ - ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေအခန်း (၈)၊ ပုဒ်မ (၂၂)၊ ပိုဒ်ခွဲ (က)၊ အငယ် (၁) အရ မဲရုံပိတ်ပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် (၁၀) ဦးထက်မနည်း သော ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူတို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် ဆန္ဒမဲများကိုရေတွက်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါ၍ ပြည်သူတို့အနေဖြင့် မဲရုံဖွင့်ချိန်နှင့် ဆန္ဒမဲရေ တွက်ချိန်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင် စောင့်ကြည့်ကြပါရန်လည်း အလေးအနက်တိုက် တွန်းအပ်ပါသည်။
Posted by HinLinPyin at 04:160comments Links to this post
Posted by HinLinPyin at 04:110comments Links to this post